I-TX PUBG yokuHamba ngokuHamba 🥇 Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
I-TX PUBG Imfono mfono Android kugula
Ngaba ujonge uncedo oluthile? Jonga eyethu PUBG Imfono mfono Android kugula!
Ukuphuhlisa ukuziva ngathi kwi-PUBG Mobile TX hacks ngesitshixo semveliso yosuku olunye!
Bonisa izakhono zakho ngokukhetha ukuqhekeza ixesha elide kwaye uthenge isitshixo semveliso yeveki e-1!
Ngaba ujonge ukufumana ixesha lethu lokudlala? Ewe, injalo kanye into eza kuyenza kwimveliso yenyanga e-1!
Ukulinganisa kunokuba nzima ukufezekisa abanye, kwaye kukho amaxesha apho iihacks ezisekwe kwiselfowuni yeyona nto ubheja ngayo. Sebenzisa i-PUBG Mobile TX ye-Android kugula kuya kukuvumela ukuba ugqwese nangona ungalingisi!
PUBG Mobile Android TX Ulwazi lomnqweno yimfumba
Abadlali abadumileyo bePUBG Mobile banokuziphumlisa iintloko zabo, njengoko kukho iPUBG Mobile ethembekileyo ethe ekugqibeleni yabetha imarike. Njengoko unokwenza uninzi lwee-PUBG zeHacks, ixesha elininzi uyakube usebenzisa i-emulator kwaye ufake iihacks kwikhompyuter yakho-akukho mfuneko yokuba sithi, izinto zahlukile kule mveliso. Ungayisebenzisa le PUBG Imfono mfono kwizixhobo zakho ze-Android, okuthetha ukuba ngoku unokuqhekeza naxa usendleleni! I-PUBG Imfono ayikaze ibe yile nto ilula ukuyazi, yonke into oyifunayo yi-PUBG Mobile Android TX.
Umatshini oSebenzayo uyafuneka okanye iselfowuni
Le PUBG yeHack Mobile ebonakala ngokupheleleyo inikezela ngokuthandwa nguMdlali kunye ne-Item ESP, kunye nokuHamba kunye noLwazi lweTshaba. I-PUBG Mobile aimbot ibandakanyiwe kolu hlaselo linikezela ngeSmooth Aiming, FOV Circle, Hold / Auto-Lock, nokunye okuninzi! Qwalasela i-aimbot yakho ngendlela othanda ngayo ngeGamepron.
Ulwazi lutshaba (impilo, izixhobo)
Akukho zixhobo ze-MISC
Malunga nePUBG Mobile Android TX
Yintoni engekhoyo ukwenza xa usebenzisa iPUBG Mobile TX? Olu qhekeko lwaluzinikele ngokupheleleyo ekunikezeleni amandla omlilo kuye nakubani na onomdla kwesi sixhobo, kwaye iziphumo ziyazithetha. Iphuhlisiwe ukuze isetyenziswe kwiWindows 10 okanye bhetele, ii-CPU ezixhaswayo kunye nee-GPU zesi sixhobo zii-Intel / AMD kunye ne-Nvidia / AMD (ngokwahlukeneyo). Uya kufumana i-HWID Spoofer ecaleni kwesixhobo uqobo xa uthenga ukufikelela kwezi cheats, ke kwanabo banehardware evaliweyo banokuyonwabela umdlalo! Iibhokisi ze-Bone kunye ne-Snaplines zenza izoyikiso zibe ngumsebenzi olula, ngelixa i-Aimbot iya kubakhathalela ngokungxama-i-Gamepron inayo yonke into!
Kutheni usebenzisa iPUBG Mobile TX ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Umgangatho ngaphezulu kobungakanani yinto onokufuna ukuba uqhelene nayo, ngakumbi ukuba unomdla wokuthenga iihacks ezingasebenzi ngokupheleleyo. Xa uthenga iihacks kwiGamepron, uza kufumana ezona zixhobo zisemgangathweni ziphezulu; Nokuba yeyamaPUBG Mobile okanye omnye umdlalo, asikhe sayisika! Uqinisekisiwe ukuba unamava asemagqabini ngelixa usebenzisa ukukopela, yiyo loo nto sikwazi ukuhlala phezulu ixesha elide. Kutheni uzikhathaza ngokuchitha imali oye wasebenza nzima ukuyifumana? Yichithe kwindawo elungileyo kwaye uthenge ii-PUBG Mobile cheats zakho kwiGamepron.
Nawuphi na umnqweno onikiweyo uya kuba luncedo njengoko imenyu yomdlalo iyakuvumela. Umzekelo, ukuziqhelanisa nemeko okuyo kunye nokwenza utshintsho kubhabho akunakwenzeka kwenye indawo - ezinye ii-PUBG hacks zeselfowuni azikhathazi ngokubandakanya imenyu yomdlalo. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuthenga i-Gamepron! Sisoloko sikubeka kwisikhundla sokugqwesa, nokuba ngubani na kwigumbi lakho lokungenisa. Betha abadlali ababalaseleyo ngeenxa zonke ngokusebenzisa imenyu yethu engaphakathi komdlalo ukuze ufumane ithuba kuwo onke amadabi. Ukuphulukana nemipu yakho yinto yexesha elidlulileyo, njengoko iGamepron ilapha ukunceda.
Umbuzo Ngaba kufuneka nditshintshe naziphi na iisetingi zefowuni ukuze ndisebenzise ukukopela?
A2. Hayi, awudingi ukutshintsha naziphi na iisetingi kwifowuni yakho.
Umbuzo. Ngaba ifuna ifowuni egxothiweyo?
A3. Akukho ngcambu iyafuneka ukuze usebenzise obu buqhetseba, ufuna umatshini obonakalayo.
Umbuzo Ngaba ndingadlala kwi-IOS? Ngaba uhlobo lwenkqubo lubalulekile?
A4. Hayi, ayixhasi iOS. Android yimfumba kuphela.
Ngeempawu ezoyikekayo ezinjengePUBG Mobile Aimbot, iWallhack, i-ESP, kunye nezinye ezininzi, azikho ezinye iindlela ezinokuthelekisa umgangatho weGamePron. Thenga isitshixo semveliso namhlanje kwaye utyhoboze kunye nomnikezeli obalaseleyo kwi-Intanethi!
Ukuphumelela kwi-PUBG Imfono kunokuba lula, ufuna nje uncedo oluncinci!
Ilindelwe Lawula kunye ne-PUBG yeSelfowuni yethu ye-TX ye-TX?